यसपालिको असार १५
नेपाल बहुजाती र बहुभाषा भएको देश मात्र नभैइ बहु सांस्कृतिक र बहुपर्व पनि भएको देश हो। यहाँ बडा दशैं र तिहार मात्र नभै बर्षको १२ महिनामा हर महिना केही न केही पर्व भएकै हुन्छ। बैशाखमा बैशाख पुर्णिामा, जेठमा भुमी, असारमा असार पन्ध्र ( दहि चिउरा खाने दिन), साउनमा साउन संक्रान्ती आदि इत्यादी।
आजभोलि असार। अझ भनौ हिजो असार पन्ध्र अर्थात दहि चिउरा खाने दिन। र अर्को कुरा रोपाई गर्ने दिन। म काठमाडौको धुलो हिलो भन्दा अलि पर तर काठमाडौ भित्र नै पर्ने साँखु बस्तिमा हातमा क्यामेरा लिइ एक फकिरको भेषमा भौतारिदै पुगे। शहरको ठमेल तथा विभिन्न गल्ली सडकहरुमा धानको एक बिठा रोपेर असार पन्ध्र मनाउनेहरु र गमलामा धानको बीउ रोपेर असार पन्ध्र मनाउदै आफुलार्इ समाचारको केन्द्र बनाउने नेताहरु भन्दा खेतको मलिलो हिलोसँग साइनो गाँस्दै रोपाई गरेर असार पन्ध्र मनाउने आम किसानहरु खुसी देखिन्थ्यो। हुन त आजभोली पहिलाको तुलनामा फाँड खेतहरु बाँझो देखिने क्रम बढ्दै गएको छ । उपत्यका जस्तो सम्म परेको ठाउँको खेत त बाँझो देखिन्छ भने पहाडको ती खेतहरुको हालत कस्तो होला ? देशको युवाहरु परदेशिने भएकाले खेतहरु बाँझै रहनु परेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भै कन पनि असारको बेलामा खेतमा धानको सट्टा झार उम्रनु भनेको कत्ती दर्दनाक कुरा हो। शहरिया मुलुकको खेत बाँझो बस्नुको कारण यो पनि हो । हरेक खेतहरुमा धान फल्नुको सट्टा घरहरु ठडिदै गर्इरहेको छ । हरेक बाँझो खेतहरु जग्गाको लागी प्लटिङ बनाएको देखिन्छ। असारमा खेतहरु हिल्याउन ट्याक्टर तथा हल गोरु नभइ जग खन्न डोजरहरु लाममा देखिन्छ। यस्तै रफतार भै रहने हो भने भोलिका दिनमा नेताहरुले मात्र हैन। हरेक किसानहरुले पनि गमलामा धान रोप्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न।
बर्ष बितेसँगै हरेक असारहरु परिवर्तन भएर आउदै गरेको पाइन्छ। हिजोको असारमा गाउँघरका सबै जना खेतमा हलो, हिलो, कोदालीसँगै बाउसे र हातहातमा धानको बीउ बोकेर रोपारहरु असारे गीत गुनगुनाउदै रोपार्इमा मस्त ब्यस्त रहन्थ्यो। तर आज ति कुरा एका देशको कथा जस्तै हुँदै गैरहेको छ । असार पन्ध्र अर्थात दही चिउरा खाने दिन। पहिला पहिला हर कोहिले पनि असार पन्ध्रमा बिहान उठेर सुरुमा दही चिउरा नखाई केही खाँदैनथ्यो । तर आजभोली त्यो चलन पनि अब कहाँ रह्यो र। नेपालको हरेक चलनहरु सुन्दर संस्कार हुन्। आजभोली दहिको सट्टा छ्याङ र टुबोर्गको बोतलहरु हातमा देखिन्छ। मोर्डन जमानासँगै बिलाउदै गएको छ हाम्रो पहिचान। परिवारको सबै सदस्य एकै ठाउँमा जम्मा भएर हाँस्दै र रमाउदै दहि चिउरा खाएको त्यो बिगत, मात्र बिगतमा सिमित रहदै गएको छ। भनिन्छ पुरानो चलनहरु मध्ये अनावश्यक रुपमा मनाइने चाड छोड्दै आउँदा फरक पर्दैन। तर के सब परिवार रमाउदै हाँस्दै एकै बर्षको एक दिन दहि चिउरा खानु के राम्रो पक्ष हैन र ? के यसले बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार र आत्मियता ल्याउदैन र? हुन त दहि जुन सुकै बेलामा खान सकिन्छ। तर असार पन्ध्रलाई खास बनाउदा के नै बिग्रन्छ र। यो त हाम्रो परम्परा पनि हो।
साँखु बजार हुँदै जर्सिङपौवासम्मको यात्रा सकाएर घर फर्किदै गर्दा बेस्सरी भोक लागेको थियो। सोचे घर गएर दहि चिउरा टन्नै खान्छु। तर भोकले कहाँ पर्खन्छ र। भोक खप्नै नसकेर होटल छिरे। होटल भनौ या भट्टि। आसपास अरु होटल तथा खाजा घर त्यति सफा देखिन। मलार्इ भोक मेटाउनुथ्यो। खाजा सेट मगाए। एकै छिनमा म जस्तै मेरै उमेरका ४/५ जना केटाकेटीको एक हुल आइपुग्यो। आउने बित्तिकै "आन्टी छ्याङ ल्याउनु त ५ ठाउँमा।" भन्दै अर्डर गर्यो। नभन्दै बियर पिउने ठूलो ग्लासमा भरीभरी छ्याङ ल्याइदियो। तिर्खाएर आएको बटुवाले पानी पिए झै सबै जनाले छ्याङ घुट्काउन थल्यो। मलाइ कता कता नमिठो भएर आयो। देशको यूवाहरु प्रति दया भाव पलाउदै आयो। हतारहतार खाजा सकाए । घरमा गएर दहि चिउरा खाने योजनालाइ बासी भातको टिफिन बनाएर झोलामा हालेर खाजा घरबाट निस्के। के के सोच्दासोच्दै घर आइपुगेछु। एक कचौरा दहि चिउरा मलाई कुरेर बसिरहेको रहे झै लाग्यो। अरुले संस्कार भुल्यो भन्दैमा म किन अल्मलिनु ? स्वाद मानिमानी दहि चिउरा खाए र असार पन्ध्रलार्इ बिदाई गरे।